Koronaavaayiras: 'Yeroo kanatti waan ogeessota fayyaatiif hamilee kennu hojjechuu qabna' - BBC News Afaan Oromoo
Koronaavaayiras: 'Yeroo kanatti waan ogeessota fayyaatiif hamilee kennu hojjechuu qabna'
3 Waxabajjii 2020
Magaala Adaamaatti konkolaachisaa Taaksii Magaala keessaa kan ta'e dargaggoo Maaruuf Usmaan erga dhibeen Covid-19 kun dhufee jalqabee ogeessota fayyaatiifi qaamolee nageenyaatiif tajaajila taaksii tolaan kennaa jira.
Taaksii isaa keessattis barreefama "Ogeessota fayyaafi qaama nageenyaa yoo taatan hin kanfalinaa, waraqaa eenyummaa keessan qofa nutti mul'isaa" jedhu maxxanfamee jira.
Dargagoon kuni ammaan duras tajaajila geejjiba tolaa magaala keessaa kana barsiisotaa fi poolisootaaf kennaa ture.
Taaksii barsiisotaa fi poolisoota tola keessummeessu
Erga koronaavaayirasiin Itoophiyaa keessatti argamee ammoo xiyyeeffannaan isaa gara ogeessota Fayyaatti jijjiire.
"Ani dirqama lammummaa kiyya bahuuf jedheeni kanin tola ooltummaa kana jalqabe. Yeroo kanattimmoo ogeessonni fayyaa nuuf jedhanii dhibee kanaf ofsaaxilanii hawaasa gargaaraa jiru. Erga isaan nuuf jecha hammana dhama'u ta'ee nutimmoo hamilee ta'uufii qabna"jedha.
Walgargaaruu fi waliif yaaduun kuni yoo cime ogeessonni fayyaas hojii amma irra jiran kana nufffii malee gammadanii hojjetu jechuunis hima.
Qaamoleen kunneen yeroo taaksii isaa kana seenanii barreefama kana dubbisan hedduu akka gammadaniifi galateefatanis hima.
"Ogeessonni fayyaa taaksii kana seenanii yoo dubisan ni ajaa'ibsiifatu.kaan amanuufuu ni rakkatu. Waraqaa eenyummaa isaanii agarsiisanii tolaan fayyadamu. Kaan ammoo fayadamanii taarifaa ol naaf kanfalanii bu'u, baayyee na jajjabeessu" jedha.
Maaruuf taaksii ittiin tajaajila tolaa ogeessota fayyaa fi qaama nageenyaaf kennu kana galii guyyaa abbaa qabeenyaatiif galchuun hojjeta.
Hojii tola ooltummaa kana waan kenneef gammachuu guddaan argadhe malee jireenya kiyyarratti dhiibbaan dhufe hin jirus jedha.
"Taaksiin kuni kan namaati. Guyyaadhaan galiin dirqama galchuu qabu nijira. Isarraa homaa hir'isee hin beeku. Tajaajilli tolaa kuni galii kiyyaa fi kan gargaaraa kiyyaarraa kan hir'atuudha. Galatni waaqaaf haa ta'u gocha Kanaan gammachuu qabna malee homaa hin miidhamne" jedha.
Namootni biroos yeroo kanatti ogeessota fayyaa osoo jajjabeessanii birrii caalaatti gammachuun argatan guddaa waan ta'eef hojii kana jalqabuu qabu jechuunis dhaama, Maaruuf.
SALPHAATTI ADDA BAASUUF: Mallattoowwan koronaavaayirasii maal fa'i?
KORONAAVAAYIRASII: Gaaffilee keessaniif deebii
MAAL GOCHUUN QABA: Walirraa fagaachuufi adda of baasanii turuu
WANTOOTA SAGAL: Waa'ee koronaavaayiras nuti hin beekne
QUBA QABDUU?: Wal-qunnamtii saalaa fi Koronaavaayiras
Taaksii oggeessa fi hojjattoota nageenyaatiif tola keessummeessu
Magaala Adaamaatti taaksiin dargaggoo Maaruuf Usmaan, gaafuma balbala olseenan beeksisa "barsiisotaa fi poolisoota hin kafalchiifnu, waraqaa eenyummaa qofa nu agarsiisaa," jedhutu maxxanfamee mul'ata.
11 Adooleessa 2019
'Haala yaaddessaa' dhalattoonni Tigraay lafa tursiisa Affaar keessaa itti jiran
26 Waxabajjii 2022
Itoophiyaan hanga yoonaatti lammiileeshee kuma 40 caalan Sa’uudiirraa deebisuu ibsite
Irra deddeebiin yoo sobne dhugaa fakkaachuu danda’aa? Namoonni hoo ni amanuu laata?
Ajjeechaan Gimbii atattamaan akka qoratamu UN gaafate
23 Waxabajjii 2022
Ameerikaan ajjeechaa Gimbii balaaleeffatte, MM Abiy tarkaanfiin eegaluu himan
21 Waxabajjii 2022
Ajjeechaa rifaasisaa Gimbiirraa kanneen lubbuun hafan haala akkamii keessa jiru?
22 Waxabajjii 2022
Haleellaa Aanaa Gimbiitti raawwatame kanneen ijaan argan kan himan
20 Waxabajjii 2022
Waa'ee ajjeechaa Gimbii, Gambeelaafi kaanii paartiin biyya bulchuufi mormitootaa maal jedhan?
Itoophiyaan ganna kana duula biqiltuu biiliyoona 6 dhaabuuf karoorfatte har'a eegalte
Shillimiin Daangaa Qananii irraa weelliste maali?
Obboleessi qondaala ABO Lammii Beenyaa, akkamitti ajjeefame?
Kaayyoo qabsoo isaa, dhimma araraafi halleellaa tibbanaa irratti 'ABO-WBOn' maal jedha?
Namoota bilbila ismaartifoonii dhiisuuf murteessaa jiran
Yeroo dhuma kan haaromfame: 25 Amajjii 2022
Dargaggeessi dheerinaan Nagawoo Jimaa 'nan caala' jedhu Gujiirraa as bahe
Manni murtii US mirga ulfa baasuu dhorkuunsaa addunyaarratti miira walmakaa uume
Godaantonni hedduummatanii osoo Ispeen galuuf yaalanii 23 du'an
Raashiyaan miisaa'eela dandeettii niikulaaraa qaban Beelaaruusiif kennuuf
Miilli jallatee dhalatu akka wal’aansaan sirratu beektuu?
Manni murtii Olaanaa Ameerikaa mirga heeraa ulfa baasuu dhorke
© 2022 BBC. Qabiyyeewwan maddawwan alaa irraa ta'aniif BBCn itti gaafatamaa miti. Gara geessituu alaatti akkaataa itti hojjennu dubbisi.